WARBIXIN: Pep Guardiola Oo Taariikh Ka Dhigay Champions League, Mid Kalena Ka Xigto Guul Ay Ka Gaarto Kooxda Shakhtar Donetsk – Kooxda.com
Home 2017 December Ingiriiska, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino WARBIXIN: Pep Guardiola Oo Taariikh Ka Dhigay Champions League, Mid Kalena Ka Xigto Guul Ay Ka Gaarto Kooxda Shakhtar Donetsk
WARBIXIN: Pep Guardiola Oo Taariikh Ka Dhigay Champions League, Mid Kalena Ka Xigto Guul Ay Ka Gaarto Kooxda Shakhtar Donetsk
Tababaraha Kooxda Man city ee Pep Guardiola ayaa galay taariikhda tartanka champions league xilli kooxdiisa Man city goordhaw la ciyaari doonta kooxda Shakhtar Donetsk kulankii ugu dambeeyay ee wareega Group-yada.
Guardiola ayaa tababare Noqon doona kulankiisii 100-aad ee tartanka champions league kulanka ay kooxdiisu la ciyaari doonto kooxda Shakhtar Donetsk.
Tababaraha reer Catalonia ayaa ku guulaystay tartanka 2 jeer isaga oo jooga kooxda Barcelona isaga oo la mid ah tababarayaasha Miguel Munoz, Carlo Ancelotti, Giovanni Trapattoni, Johan Cruyff, Frank Rijkaard Iyo Zinedine Zidane kuwaas oo tartanka ku guulaystay iyaga oo xiddig ah iyo iyaga oo tababare ah.
Marka kaliya ee uu Guardiola ku fashilmay in uu gaaro semi-finalka tartanka ayaa ah xilli ciyaareedkii hore kadib markii uu finalka iyo semi-finalka gaaray todoba jeer isaga oo jooga Bayern iyo Barcelona.
Tababarayaasha haatan ka qayb qaadanaya kaliya Jose Mourinho ayaa ah tababaraha kaliya ee ka badan ee hogaamiyay koox isaga oo 137 jeer soo kala maamulay kooxaha Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid Iyo Manchester United.
Guardiola ayaa 50 kulan oo uu hogaamiyay Barcelona guul gaaray 30 kulan, isaga oo bar-baro galay 15 kulan guuldarana la kulmay 5 kaliya waxana uu dhaliyay 117 gool halka laga dhaliyay 42.
Tababaraha reer Spain ayaa Bayern munich hogaamiyay 36 kulan 23 kulan guul ayuu gaarayy halka 5 kulan laga badiyay bar-baro gashay 8 kulan waxana ay kooxdaasi dhalisay 87 kulan halka laga dhaliyay 37 gool.
Man City ayaa uu hogaamiyay 13 kulan 8 kulan wuu badiyay 3 kulan bar-baro ayuu galay halka laga badiyay 2 kulan waxa uu dhaliay 31 gool halka laga dhaliyay 19.
Waxa uu cel-celis ahaan gaaray 62% halka ay kooxihii uu soo tababaray dhaliyeen goolal 2.33 kulan kasta halka laga dhaliyay 0.99.
Guul uu caawa ka gaaro kooxda Shakhtar waxa uu bar-barayn doonaa rikoor ay dhigeen kooxaha Real Madrid (2011/12 and 2014/15), Barcelona (2002/03), Spartak Moscow (1995/96), Milan (1992/93) Iyo Paris Saint-Germain (1994) kuwaas oo dhamaan wakhtiyada ku hoos qoran guul gaaray kulamada 6-da ah ee wareega Group-yada.